Somaliland:Markab Sida Qaxoonti Yemen Ka Yimid Oo Dekedda Berbera Ku Soo Xidhay
Home Somali News Somaliland:Markab Sida Qaxoonti Yemen Ka Yimid Oo Dekedda Berbera Ku Soo Xidhay
Markab laga leeyahay dalka Yemen oo sida Qaxoonti ka soo cararay Colaadaha Yemen muddada ka socday ayaa xalay goor dambe soo gaadhay Dekedda Berbera. Markabka ayaa sida 174 Qof oo iskugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin.
Gudoomiyaha gobolka Saaxil, Fahmi Cabdi Bidaar, ayaa BBC-da u sheegay in Qaxoontiga oo ay ku jiraan Caruur iyo haween ay Dekedda ku qaabileen Masuuliyiinta Heer gobol iyo kuwa degmada,Wasaaradda dib u dejinta iyo Saraakiil ka socda Hay’adda Qaxoontiga Aduunka UNHCR.
Badhasaabka ayaa sheegay in dadkaasi muddo maalmaha lagu nasin doono Berbera maadaama ay laba maalmood badda ku soo jireen kadibna qof walba halkii uu u socday uu tagi doono lana siin doono Sahay.
Waxaa hore Dekedda Berbera u soo gaadhay dad ka badan 70 Qof, waxaana Qaxoontiga Markabkani siday noqonayaa Qaxoontigii u badnaa ee soo gaadhay Somaliland. Xukumadda ayaa hore u sheegtay inay diyaarinayso Meelo la dejiyo dadka la filayo inay ka soo cararaan Duqaymaha iyo dagaalada Yemen.